मुस्कुराउँदै अस्पताल भर्ना हुन ओली र समिक्षा हस्पिटल पुग्दै गर्दा जे भयो त्यहाँ ……. सबै शुभचिन्तक र पत्रकार पनि परे अचम्म ! – " सुलभ खबर "
मुस्कुराउँदै अस्पताल भर्ना हुन ओली र समिक्षा हस्पिटल पुग्दै गर्दा जे भयो त्यहाँ ……. सबै शुभचिन्तक र पत्रकार पनि परे अचम्म !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भर्ना हुने भनिएपछि अपराह्नदेखि नै सञ्चारकर्मी अस्पतालमा पुगेका थिए ।उहाँ आउने प्रतीक्षामा सञ्चारकर्मी दिनभरि नै अस्पताल परिसरमा रहेका थिए तर प्रधानमन्त्री बालुवाटारमा विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएर मात्र साँझ ६ः१० मा अस्पताल पुग्नुभयो । उहाँ ढोकाभन्दा पर नै गाडी रोकेर हिँड्दै अस्पताल
प्रवेश गर्नुभएको थियो । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा सोमबार साँझ गाडीबाट ओर्लनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री केपी ओली शुभेच्छुकसामु मुस्कुराउनु भयो । उँहा सञ्चारकर्मीसँग बोल्नु भएन। प्रसन्न मुद्रामा हात हल्लाउनु भयो। प्रधानमन्त्रीसँगै उहाँकी पत्नी राधिका शाक्य, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलसमेत रहनुभएको थियो ।
ओलीलाई मिर्गौला दिन चार घण्टाअघि नै अस्पताल पुगेकी थिइन्, ३२ वर्षीया समीक्षा संग्रौला। गाडीबाट ओर्लनेबित्तिकै संग्रौला आकर्षणको केन्द्र बनिन्। दर्जनांै फोटोग्राफरले पछ्याएपछि उनी पनि मुस्कुराउँदै भित्र छिरिन्। संग्रौला र लिने प्रधानमन्त्री ओलीबीच मामा÷भान्जीको साइनो छ। दुवैजना चार घण्टा फरकमा अस्पताल पुग्नु भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको बुधबार पुनः मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिँदै छ । मिर्गौला दिने व्यक्तिको नाम औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरिएको छैन । दाताको सबै परीक्षण भने गरिसकिएको छ । नेकपाका अध्यक्ष ओलीको २०६४ साउनमा भारतको एपोलो अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो । “त्यतिबेला नेपालमा मिर्गौला प्रत्यारोपणको सेवा नभएकाले भारतमा गरिएको थियो”, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भन्नुभयो, “तर अहिले नेपालमा नै मिर्गौला प्रत्यारोपणको सेवा उपलब्ध रहेको छ । नेपालकै अनुभवी चिकित्सक, विशेषज्ञ र अस्पताल रहेका छन् । मुलुकले हासिल गरेको यो सामथ्र्यमा गौरव गर्दै प्रधानमन्त्रीले स्वदेशमै मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने निर्णय लिनुभएको हो ।”
प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपणको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको अस्पतालले जनाएको छ । उहाँका लागि आवश्यक मिर्गौला दिने व्यक्ति पनि आजै अस्पताल भर्ना भइसक्नुभएको छ । आजै साँझदेखि नै प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य परीक्षण हुने छ । शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रा डा प्रेमकृष्ण खड्गाले भन्नुभयो, “कुनै पनि ‘अप्रेशन’ गर्नका लागि केही तयारी गर्नुपर्छ, त्यही तयारीका लागि प्रधानमन्त्रीलाई आजै अस्पताल भर्ना गरिएको हो ।” प्रधानमन्त्री ओली शिक्षण अस्पतालको अतिविशिष्ट व्यक्तिका लागि छुट्टयाइएको ‘डिलक्स’ कक्षमा भर्ना हुनुभएको छ । उहाँ ६०१ नं शय्यामा भर्ना हुनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले स्वदेशमै मिर्गौलाको प्रत्यारोपण गर्ने निर्णय लिएपछि यसलाई शिक्षण अस्पताल चिकित्सकले अवसरका रुपमा लिएका छन् । “हामीले अवसरका रुपमा लिएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षण अस्पतालप्रति सबैको विश्वास थियो, यो झन् बढेर गएको छ ।”
मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका बिरामी सामान्यतयाः छ दिनमा घर फर्कन सक्नेछन् । कार्यकारी निर्देशक खड्गाले प्रत्यारोपण सम्पन्न भएको छ दिनमा प्रधानमन्त्रीलाई घर पठाइने बताउनुभयो । “अहिलेसम्मको हाम्रो अनुभवले त्यही बताउँछ”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो लक्ष्य पनि त्यही छ, प्रत्यारोपण भएको छ दिनमा ‘डिस्चार्ज’ गर्छौँ, हाम्रो ‘रुटिन’ त्यही हो, कुनै पनि बिरामीलाई पाँचदेखि छ दिनमा घर पठाउँछौँ ।”
शिक्षण अस्पतालमा साताको एक दिन बुधबार मिर्गौला प्रत्यारोण हुँदै आएको छ । एक जनामा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न तीनदेखि चार घण्टा लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । सातामा दुई वटा मिर्गौला प्रत्यारोपण हुँदै आएको कार्यकारी निर्देशक खड्गाले जानकारी दिनुभयो ।
सेवा शुभारम्भ गरिएको एक दशकका अवधिमा शिक्षण अस्पतालमा हालसम्म करीब ८०० जनामा मिर्गौलाको सफल प्रत्यारोपण भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । शिक्षण अस्पतालमा २०६५ साउनमा पहिलो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको थियो ।
सर्वसाधारणबाट प्रशंसा स्वदेशमै मिर्गौलाको प्रत्यारोपण गर्ने देशका कार्यकारी प्रमुखको निर्णयको जनस्तरमै तारिफ भएको छ । सानोभन्दा सानो स्वास्थ्य समस्याको उपचारका लागि विदेश जाने परम्परा त्यागेर स्वदेशमै उपचार गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय धेरै राम्रो भएको सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया छ ।
शिक्षण अस्पताल परिसरमा भेटिइनुभएका धापासीका दीपक शर्माले प्रधानमन्त्रीले स्वदेशमै मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने निर्णय लिएर निकै राम्रो सन्देश दिनुभएको बताउनुभयो । “प्रधानमन्त्रीको निर्णय मलाई निकै राम्रो लागेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षण अस्पतालमा धेरै राम्रो सेवा छ, अन्य नेताले पनि यहीँ उपचार गराए हुन्छ ।”प्रधामन्त्रीसँगै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङलगायत उहाँको सचिवालयका सदस्य पनि पुग्नुभएको थियो । शिक्षण अस्पतालमा प्रधानमन्त्रीका शुभेच्छुकको पनि बाक्लो उपस्थिति थियो ।